IATA Waxay Bilowday Barnaamijka Tababar Waaritaanka Deegaanka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » IATA Waxay Bilowday Barnaamijka Tababar Waaritaanka Deegaanka
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Waajib ah • Technology • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka
In kasta oo joogtayntu ay door muhiim ah ka ciyaartay warshadaha sannado badan, haddana waa muhiimadda koowaad maadaama ay waaxdu dib uga dhisayso saamaynta cudurka faafa ee COVID-19.
IATA waxay tababaro siineysay warshadaha duulista ilaa 1972.
Manhajka IATA wuxuu daboolayaa in kabadan 350 koorso oo ay qaataan in kabadan 100,000 oo kaqeybgalayaal sanadkiiba.
Qeybaha kala duwan waxaa loogu talagalay in lagu muujiyo sida ficillada shakhsiyadeed iyo guud ahaan siyaasadaha shirkaddu u saameeyaan joogtaynta.
The Ururka Caalamiga ee Gaadiidka Cirka (IATA) ayaa bilaabay barnaamij tababar oo ku saabsan joogtaynta deegaanka Jaamacadda Geneva (UNIGE). In kasta oo joogtayntu ay door muhiim ah ka ciyaartay warshadaha sannado badan, haddana waa muhiimadda koowaad maadaama ay waaxdu dib uga dhisayso saamaynta cudurka faafa ee COVID-19. Daraasad dhowaan lagu sameeyay in ka badan 800 oo xirfadlayaal tababar xirfadeed ah, joogtaynta waxaa loo aqoonsaday inay tahay baahida tababarka ugu sareysa, si loo hubiyo in shaqaaluhu heli karaan xirfadaha aasaasiga ah ee farsamada iyo hawlgalka, laakiin sidoo kale xirfadaha jilicsan ee loo baahan yahay
The IATA - UNIGE Shahaadada Daraasaadka Sare (CAS) ee Joogtaynta Deegaanka ee Duulista waxay ka kooban tahay lix qaybood oo ka hadlaya mowduucyada soo socda:
Istaraatiijiyad Istaraatiijiyad Waara
Nidaamyada Maareynta Deegaanka ee Duulista
Hogaan Masuul ah
Shidaalka Hawada ee Waara
Mas'uuliyadda Bulsheed ee Shirkadeed iyo Anshaxa Urur
Suuqyada Kaarboon iyo Duulista
Qeybaha kala duwan waxaa loogu talagalay in lagu muujiyo sida ficillada shakhsiyadeed iyo guud ahaan siyaasadaha shirkaddu u saameeyaan joogtaynta. Kaqeybgalayaashu waxay baran doonaan inay aqoonsadaan tilaabooyin dhowr ah oo la fulin karo si loo wanaajiyo waaritaanka muddada dhow, dhexdhexaad, iyo muddada dheer. Barnaamijku wuxuu sidoo kale isku daraa koorsooyinka gaarka ah ee deegaanka iyo masuuliyada bulshada ee shirkadaha, anshaxa ururada iyo hogaaminta mas'uulka ah, iyada oo ujeedadu tahay in loo ogolaado kaqeybgalayaashu inay helaan jawaabahooda u gaarka ah waxa loola jeedo 'hogaamin masuuliyadeed' shaqadooda shaqsiyeed iyo sida loola dhaqmayo go'aan qaadasho mas'uuliyadeed iyo ka fogow indho la’aanta anshaxa.
“Shaqaalaha duulimaadku waa xirfad sare maadaama ay u baahan tahay inay ka shaqeyso una hogaansanaato heerar badan oo caalami ah iyo kuwa warshadeed. Sanadihii la soo dhaafay waxaan la qabsanay dalabkeena tababarka si aan ula kulanno shuruudaha isbedelaya ee warshadaha. Sidaa awgeed layaab maleh inaan hada kudareyno manhajkeena tababaro waara deegaanka. Hubinta in dhammaan kuwa ka shaqeeya warshaddan la siiyo fursad ay ku bartaan xirfadahaan cusub waa mid muhiim ah, maadaama aan si isa soo taraysa xoogga u saarayno sidii hawlgalkeennu u noqon lahaa mid waara, iyadoo dib loo dhisayo saamaynta cudurka faafa ee COVID-19, ”ayuu yiri Willie Walsh, Agaasimaha Guud ee IATA.
IATA waxay xulatay lamaanaheeda tacliinta sare UNIGE si ay u abuurto koorsada maadaama ay tani u saamaxeyso isku darka gaarka ah ee khibrada aqooneed ee UNIGE iyo aqoonta warshadaha IATA. Qaybta bulshada ee barnaamijku waxay wax ku bari doontaa una diyaarin doontaa hogaamiyaasha mustaqbalka mas'uuliyada ka qayb qaadan doonta samaqabka warshadaha duulista iyo bulshada guud ahaan.
Tababbarka waxaa loo bixiyaa qaab-shaqsiyadeed iyo ama xirmo dhammeystiran oo lixda ah. Koorsooyinka waxaa lagu bixiyaa fasallo toos ah oo toos ah, iyadoo la siinayo waqti-dhab ah is-dhexgal baraha uu hoggaaminayo barashada khadka tooska ah ee ay kaqeybgalayaashu ku wada xiriiri karaan, eegi karaan, ugana doodi karaan bandhigyada. Inta lagu gudajiro kalfadhiyada kaqeybgalayaashu waxay sidoo kale laxiriiri doonaan ilaha waxbarida inta ay ushaqeynayaan koox koox, dhamaan intarnetka.
IATA waxay tababaro siineysay warshadaha duulista ilaa 1972. Manhajkeeda wuxuu ka koobanyahay in kabadan 350 koorso oo ay qaataan in kabadan 100,000 oo kaqeyb gala sanadkii. Koorsooyinka waxaa lagu bixiyaa qaabab kala duwan sida fasalka (fool-ka-waji iyo muuqaal), khadka tooska ah, iwm, iyadoo lala kaashanayo in ka badan 470 la-hawlgalayaal tababar ah.